You are at:Home»Author: Witmone
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မရှိသေးသည့် ‘၀’ အဖွဲ့ အပါအ၀င် မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခုနစ်ဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA ၊ ‘၀’လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ UWSA ၊ ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ SSPP နှင့် မိုင်းလားအဖွဲ့ NDAA တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကိုးကန့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA ၊ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA နှင့် တအာင်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ TNLA တို့နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မဆွေးနွေးပါဘူး။ အဓိက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရင်းနှီးအောင် တွေ့ဆုံတာပါ။ အိမ်သွားတယ်ဆိုတာ မိသားစုလို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပိုပြီးတော့ ရင်းနှီးအောင် ဆိုပြီးတော့ သွားပြီး တော့သွားတွေ့တာ။ သူပြောတဲ့ NCA နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြင်ထားတာနဲ့ မတူဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က အရင် NCA တော့ ကျွန်တော်တို့က ထိုးမှာ မဟတ်ဘူး။ ဒီတစ်ခေါက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရုတ်ပြည်ကို သွားတဲ့အချိန်က တရုတ်ပြည်ရဲ့ One Belt, One Road ပေါ်လစီပေါ့နော်။ အဲဒါလည်း နည်းနည်းဆွေးနွေးတာ။ ဟိုရှိကျင်ဖျင်နဲ့ တွေ့လိုက်သေးတာပေါ့နော်။ ဒီကြားထဲမှာ သဘောတူညီထားတာ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ဒီဟာ တိုက်တွန်းပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ရောက်အောင် သူတို့ရဲ့အကျိုး ဗမာပြည်ရဲ့ အကျိုးကိုပေါ့ နှစ်ဖက်အကျိုးလည်း ပါတာတော့ အဲဒါကြောင့်မို့ သူတို့က အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်အောင်ပေါ့။ တပ်ဘက်က UWSA ‘၀’နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ တွေ့မယ်မထင်ပါဘူး။ ဟိုစစ်တိုက်နေတဲ့ သုံးဖွဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့က ခေါ်လာတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ ခုနစ်ဖွဲ့က နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီပေါ့ သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး။ သူ့ရပ်တည်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်ရှိတာပေါ့ ညှိယူရမှာပေါ့။ အားလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မယ်ဆို တစ်ရက်ရက်တော့ ငြိမ်းချမ်းလာမှာပါလို့ ကျွန်တော်အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘယ်လို ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်မယ်ဆိုတာ ရှိပါတယ်”ဟု ‘၀’ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ပြင်ပဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဦးကျောက်ကွက်အမ်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များ အရေးပါနေဆဲ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
မီဒီယာဂုရုတယောက်ပြောစကား – မြန်မာပြည်ကတော့ ဆင်းရဲနေဦးမှာပဲ၊ လာပ်စားနေဦးမှာပဲ၊ နောက်၁၀နှစ်ကြာလဲ သိပ်ထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲ လုပ်နိုင်သမျှလုပ်မှာပဲ၊ လက်နက်ကိုင်တွေ၊ အစိုးရအရာရှိကြီးတွေလဲ စားနိုင်သမျှ စားကြမှာပဲ။ ဒီတော့ ကိုယ်လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုပဲ လုပ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလုပ်ရုံပါပဲ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပေါ့ ..တဲ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ကြီးက ဘေးကြပ်နံကြပ်နဲ့ စနစ်ပြောင်းပေးလိုက်ရသလို.. ဘေးကြပ်နံကြပ်နဲ့ပဲ လွှတ်တော်ထဲကထွက်သွားဖို့ မျှော်လင့်နေဆဲပါ။ အလွယ်တကူတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ မရေးချင်လဲ မြန်မာ့စစ်တပ်အကြောင်း ကိုယ့်ဥာဏ်တထွာတမိုက်နဲ့ ရေးလိုက်ပါဦးမယ်…။
စစ်သား ၄သိန်းကျော်က ကုန်ထုတ်လုပ်အား မရှိပဲ စစ်လေ့ကျင့်နေရတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေလဲ သိန်းနဲ့ချီပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်အား မရှိပဲ စစ်လေ့ကျင့်နေရတယ်။ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို အားလုံးသိကြပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော် စစ်သုံးစရိတ် အများကြီးသုံးနေခြင်းကို ချက်ခြင်း တားဆီးဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ၂၀၁၁ ကတည်းက ဘတ်ဂျတ်ရဲ့ ၁၃% ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီကနေ့တော့ ကမ္ဘာ့ စစ်သုံးစရိတ် Military Expense by GDP ကိုလေ့လာကြည့်တော့ မြန်မာနိုင်ငံလို ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံအဖို့ အရမ်းများနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပိုပြီး မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရ၊ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးအလွန်အရေးကြီးကြောင်း သိပြီးဖြစ်ပေမဲ့၊ တကယ်လက်နက်ကိုင်နေသူတွေက မသိတာလား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာလဲ စစ်သုံးစရိတ် ၃% နဲ့ ရာနှုန်းအနေနဲ့ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပမာဏအနေနဲ့တော့ ၂.၁၄ ဘီလျံဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဘတ်ဂျတ်ရဲ့ ၁၃% ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။
အစိုးရသစ် တနှစ်ကျော်လာချိန်မှာလဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး အလွန်အရေးကြီးကြောင်း၊ မပစ်ခတ်ဘူးဆိုရင်တော့ လေနဲ့ပဲ စစ်တိုက်ရမှာ ဖြစ်လို့ ..တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံလို မြောက်ကိုးရီးယား ချိန်းခြောက်မှုရှိနေလဲ တိုးတက်နေတာ လက်တွေ့ဖြစ်ရပါပါ။ ဒါကြောင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ယခင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရနဲ့ ယခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရ အလွန်ကြိုးစားနေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
တဟုန်ထိုး တိုးတက်သွားခြင်းတွေမှာ လေ့လာကြည့်ရင်
၁။ ခေါင်းဆောင်ကောင်း တိန့်ရှောင်ဖိန့် ဦးဆောင်ခြင်း
၂။ အမေရိကန်၊ ဂျပန် အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ချစ်ကြည်မှုရရှိခြင်း
၃။ နိုင်ငံခြားရောက် တရုပ်ပညာရှင်များစွာ ပြန်လာစေခြင်း
၄။ စစ်သုံးစရိတ်လျော့ချခြင်း၊ (စစ်တပ်နိုင်ငံရေးမှထွက်ခွာခြင်း)၊
၅။ လူမျိုးဘာသာမတူသော ပြည်နယ်များ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်စေခြင်း
စတဲ့ လုပ်ရပ်များစွာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း လူထုတခဲနက်ထောက်ခံ အာဏာရရှိခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ တရုပ်ပြည်နဲ့မတူတဲ့ အခြေအနေ များစွာ ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။
တရုပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ တောင်ကိုးရီးယား တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုများ၊၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း အာရပ်နွေဦး၊ ကမ္ဘောဒိးယား စတဲ့ မအောင်မြင်မှုများကို မြန်မာအုပ်ချုပ်သူများ လေ့လာခွင့်ရပါတယ်။ မြန်မာအာဏာရှိ ခေါင်းဆောင်များ ညီညွတ်ဖို့လိုပါတယ်။
၁။ တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရ နားလည်ညီညွတ်သွားမှ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစပွင့်ပါမယ်။ အချိန်ကာလကခု စောင့်ရပါမယ်။ ၂နှစ်လား၊ ၃နှစ်လား။ လူအကြောင်း ပေါင်းကြည့်မှသိ ဆိုတဲ့အတိုင်း လူတော်လူကောင်းတွေအချင်းချင်း ပေါင်းလို့ရပါတယ်။ ပေါင်းလို့ရသွားမှ အဲဒိတော့မှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရသွားပြီး၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး အကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်ပါမယ်။ စစ်သုံးစရိတ် လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ အမြန်အကောင်ထည်ဖေါ်နိုင်ပါမယ်၊ ဒါကတော့ သီအိုရီပါ၊ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
၂။ ပြည်သူလူထုအတွက် မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်း၊ လုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိပါသလဲ။ ဒေါသနဲ့လုပ်ဆောင်နေသူများ၊ အညျိုးနဲ့လုပ်နေသူများ၊ ကြောက်ရွှံ့ခြင်းနဲ့လုပ်နေသူများစွာ ရှိနေပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ကေအိုင်အေ နဲ့ ၀ တပ်ဖွဲ့များ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ထိုးလာဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ တပ်မတော်၊ အင်အယ်ဒီ၊ အတိုက်ခံပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တွေကို မီဒီယာအားဖြင့် ဖြစ်စေ၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့ မြှောက်ပင့်သွေးထိုးနေသူများစွာ ရှိနေပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်အယ်ဒီခေါင်းဆောင်၂ဦးကိုပါ ပါတီ(၁၃)ခုက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတိုင်တန်းထားတယ်။ ဒါလဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က သူတို့ကို တွေ့ဆုံလိုက်ရင် တင်းမာမှုရော့သွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ မတွေ့နိုင်သေး။
၄။ အခုတော့ စစ်သား၊ စစ်ဗိုလ်တွေ မြို့ထဲမှာ ရုံးသွား၊ ရုံးပြန် စစ်ဝတ်စုံ မ၀တ်ရတော့ဘူး ဆိုတော့ တိုးတက်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ၀တ်နေဆဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရင်ထွက်မယ် လို့ ကာ/ချုပ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။။ စစ်တပ်ဝန်ကြီး ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်တဲရေး နဲ့ နယ်စပ်ဝန်ကြီးဌာနတွေက ဘတ်ဂျတ်အများဆုံး သုံးပြီး အသေးစိတ်လဲ ဘာမှမတင်ပြကြပါ။ လျှော့ချဖို့ ဆိုတာလဲ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပုံ-ဇယား၊ စစ်သုံးစရိတ် 3% of GDP or 13% of Budget.
၅။ အဓိက အကျဆုံးကတော့ လက်ရှိအင်အားကြီးလှတဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များနဲ့ အင်အင်ဒီပါတီခေါင်းဆောင်များရဲ့ စိတ်ဓါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ နာကျည်းမှုတွေ၊ မာန်မာနတွေ၊ မိမိနဲ့မိသားစု အနာဂါတ်စိတ်ချမှု အာမခံရဖို့အတွက် စိုးရိမ် ကြောက်ရွှံ့ခြင်းတွေက လွတ်မြောက်ဖို့၊ ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့တတွေ အခြေခံလူတန်းစား ဆင်းရဲမွဲတေသူဘ၀တွေကို မြင်ပြီး မျက်ရည်မကျသေးဖူး ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်ကြီးလဲ လာပ်စား၊ အဂတိကြား တ၀ဲတလည်လည် ရှိနေဦးမှာပါ။
ဖားကန့်စခန်းမှာ တာဝန်ကျလျှင် အချိန်တိုအတွင်း သိန်းသောင်းချီချမ်းသာမည် . သို့သော် . . .- ကိုကိုနိုင်(ပဲခူးအနောက်) NewWatch Journal
ဖားကန့်စခန်းမှာ တာဝန်ကျလျှင် အချိန်တိုအတွင်း သိန်းသောင်းချီချမ်းသာမည် . . သို့သော် . . .—— —— —— —— ——ကျွန်တော်က ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ (၈)နှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမို့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများက လော်ပန်(သူဌေး)လို့ ခေါ်သူခေါ် ကချင်ြ…
ဖားကန့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ် – ဖေ အောင်Follow March 2, 2016
ဖေ အောင်FollowMarch 2, 2016 · ဖားကန့်ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးအား ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ကာ ကန်ပိုက်တီး နယ်စပ်ဂိတ်မှ အရာရှိအဆင့် သုံးဦးကို ခြောက်လ လစာတိုးရပ်ဆိုင်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ဟု သိရ=========================…
”ဘီဇက်ဇော်လီ(ကချင်ပြည်)” – ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ၁၉၉၀-၂၀၁၆
ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ၁၉၉၀-၂၀၁၆မြန်မာပြည် ဖားကန့် လုံးခင်း ဆိုင်းတောင် နဲ့ တရုပ်ပြည် ရွှေလီ ယင်းကျန်း မံချီ ထန်ချုန်း ကြယ်ဂေါင် ကူမင်း စတဲ့မြို့များက ကျောက်စိမ်း တူးဖေါ်ခြင်း ရောင်းဝယ်ကူးသန်းခြင်းတွေ ”ဘီဇက်ဇော်လီ(ကချင်ပြည်)” ၂၃အုပ်မြောက် စာအုပ် (220…
Ethnic parties in Myanmar’s four Christian dominated regions are worried thatalack of resources to compete with major parties and the risk of vote-splitting may affect their chances of winning seats in the looming Nov. 8 election. For minorities inacountry with 135 recognized ethnic groups, the election representsamajor opportunity.
Two-thirds of the 93 registered political parties represent minority groups. Myanmar has seven ethnicity-based states, four of which have sizable Christian populations. Kuh Eugene, who is running for state parliament in eastern Myanmar’s Kayah state, said his relatively small Kayan National Party can’t compete financially with the likes of the ruling Union Solidarity and Development Party (USDP) or the opposition National League for Democracy (NLD). He told UCANews they try reaching out to the villages where they gain major support from their ethnic people. However, he said, the remoteness of villages from polling booths will see ethnic parties lose votes. Ethnic minority groups have already raised concerns after authorities canceled the vote in 400 villages in Kachin and Karen states, due to security reasons. The loss of voting privileges in these areas could hurt many ethnic parties on election day.
Khet Htein Nan,alawmaker from the Unity and Democracy Party in Christian-majority Kachin state, feared ethnic parties in Kachin will lose votes from the villages where they can’t vote. Political parties have been asked to conclude their 60-day campaigns at midnight on Friday, Nov. 6, before Sunday’s voting. Observers see the 2015 election asacrucial test of the country’s transition toastill very fragile democracy. (Source: UCAN)